Igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala, indawo ezimeleyo
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguHélène
Igumbi lokulala elinombhede we-140, elijongene negadi, (akukho zivalo, amakhethini amnyama), igumbi lokuhlala elincinci elikhoyo.
Iivenkile zikufuphi (iindawo zokubhaka ezisekupheleni kwesitrato zivula ngo-6:30 am).
Zombini Ezweni Parish ezivalelweyo kunye Monts d'Arrée, i Landivisiau Country izipho beentlobo emangalisayo, zibe izityebi zihleli lelifa lemveli yendalo kunye nezenkcubeko zizityebi imibala nezithethe: I Elorn komlambo, nto leyo eye umthombo yayo enkulu umgquba Bog of Mougau ngo iMonts d'Arrée, edume ngobulunga bamanzi ayo, enyakazela intlanzi ekuthiwa yitrout nesalmon.
Kumasango eMonts d'Arrée, ichibi laseDrennec, indawo yesibini enkulu yamanzi kaFinistère, yenye yezona ndawo zikhulu zetrout eFransi kwaye ke yindawo enelungelo lokuloba kwezemidlalo kunye nokuloba ngeempukane.
Emazantsi ommandla, imimango yookhokho beMonts d'Arrée igqame elundini.
Olu ncedo lufikelela incopho malunga neemitha ezingama-400, xa lwalugqunyelelwe lihlathi elikhulu, namhlanje lubonelela ngenkangeleko yelizwe ngequbuliso kunye nendle egqunywe ngegorse, heather kunye negroves.
Ifumaneka kwiNdawo yeNdalo yePaki yaseArmorica, le ndawo ilungele ukuziqhelanisa nendalo: ukukhwela intaba, ukukhwela ihashe okanye ukukhwela ihashe okanye ukukhwela ibhayisekile intaba, imisebenzi yolwandle, ukujonga iintaka ezifudukayo zisuka eArré ...
I-Pays de Landivisiau ikwagcwele ngobuncwane obukhethekileyo bokwakha obufana neeNdawo ezibiyelweyo zeParish.
Le mizobo yegranite kunye ne-kersantite ziiseti ezingcwele ezenziwe ngenkulungwane ye-16 neye-17, amaxesha amnandi kwiBrittany esezantsi.
Udonga lwamatye, indawo ebiyelweyo eyahlula le ndibano yezakhiwo, yanika igama layo kwindawo ebiyelweyo yerhamente.
Eyodwa, ezi zakhiwo zibalaseleyo zezona zidalwa zantlandlolo zelifa lenkolo yamaBreton.
KWAYE NGAPHANDLE KOKULIBALA UKUFUTSHANA KOLWANDLE 😊
ukubonelela ngeebhotile ze-hydroalcoholic lotions, iiglavu ezilahlayo, iimaski zotyando.
isitrato esithe cwaka esinetrafikhi encinci, iivenkile zikufuphi, ngeenyawo
Umbuki zindwendwe ngu- Hélène
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Landivisiau